Na dia tao anatin’ny krizy aza i Madagasikara azo lazaina ho tontosa ny fampandrosoana ny faritra ao Atsimo Atsinanana ao, porofn'izany ny fahavitan'ny fotodrafitraasa maro. Anisany manome endrika ny tanana ny fitsanganan’ireo fotodrafitrasa vaovao ireo toy ny Centre Régional de l’Institut National de la Formation Pédagogique (CR INFP), CEG ao Mahatsara sy ny biraon’ny DREN ao Amboanio, ny birao iombonan’ny fananan-tany sy ny biraon’ny sampandraraham-paritry ny rano, ao Farafangana, ary ny fametrahana sy ny fanokafana ny sampandraraham-paritra miandraikitra ny fizarana karama sy ny fisotroan-dronono « Service Régional de la Solde et des Pensions » ao Farafangana sy ny "centre fiscal" ao Midongy Atsimo, ary ny fametrahana ny « Office Régional du Tourisme ». Ankoatra izay dia nahitana barazy miisa dimy teo anivon’ny faritra Atsimo Atsinanana, ny roa tamin’ireo ao amin’ny commune Evato, ny iray ao Tangainony, ny iray ao Mahavelo, ary ny iray ao Matangy, izay samy famatsiam-bola avy amin’ny BVPI avokoa. Fa anisany faritra nampitobo ny velarana ala sy faritra arovana ny tao amin’ny faritra Atsimo Atsinanana anisan’izany ny tao Mahabo Mananivo sy Vohipeno, nahazo fiofanana ihany koa ireo mpiasan’ny ala agents forestiers ao amin’ny faritra arovana ao Mahambo. Commune telo miaraka amin’ireo vondron’olona ifotony (VOI) no nahazo ny famindram-pitantanana avy amin’ny DREF dia ny commune Manambidala sy Marolala Mahafasa, ary Mahazoarivo samy ao amin’ny distrikan’ny Vondrozo . Anisany faritra nahazo tombony tamin’ny fahazoana FDL ny faritra Atsimo Atsinanana commune 46 no nahazo izany, commune 7 kosa no nahazo ny famatsiam-bola avy amin’ny FER toy ny commune Ankarana, Ambalatany, Efatsy, Marovandrika, Matangy, Ambalavato Nord et Vohilengo, ary commune 22 no nahazo famatsiam-bola avy amin’ny PSDR ka commune 14 no nanaovana “Pétits Périmètres Irrigués”, ny 04 “décortiquéries”, ary 04 “magasins de stockages”. Mikasika ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra dia ezaky ny faritra tamin’ity taona ity ny fanentanana ireo tantsaha hamboly voly avotra nanombohana ny hetsika ny tao amin’ny commune Ivandrika. Nahazo fanentanana ihany koa ireo mpamboly sy ny mpanangom-bokatra tamin’ny fanatsarana ny kalitaon’ny vokatra indrindra ny voly fanondrana toy ny kafe sy ny jirofo ary ny lodisia, nisy araka izany ny fanomezana karatra ho an’ireo mpanangom-bokatra. Mariahana fa anisany nigoka ny fahatsaran’ny vidin’ny jirofo ihany koa ny tao amin’ny faritra Atsimo Atsinanana. Anisany mitondra anjara biriky lehibe amin’ny fampandrosoana ny faritra ireo mpandraraha ao Atsimo Atsinanana, naneho ny fahavononany izy ireo amin’ny fanamboaran-dalana amin’ny ampahany amin’ny lalam-pirenena faha 5, mba tsy hisian’ny fahatapahana amin’izao fotoam-pahavaratra izao, ity lalam-pirenena mihazo an’ny Farafangana ity izay ahitana ampahany tsy vita mirefy 20 km eo. Tsy mitsahatra ny mangataka amin’ny fitondrana fohibe ny famitana azy io ny lehiben’ny faritra colonel Namany Belone. Mikasika izay fotoam-pahavaratra izay dia efa mitsinjo sahady ny fiavian’ny rivo-doza efa hatramin’ny ela ny ny faritra atsimo atsinanana, efa voarafitra ny plan de contingence na ireo tranga mety hiseho amin’ny fiantrehana ny rivo-doza, ary efa natolotra ny BNGRC sy ny CNGRC ny lisitr’ireo zavatra tokony ilaina amin’ny fiantrehana izany loza voajanahary izany.
Fa anisany ezaka nilofosan’ny teo anivon’ny faritra Atsimo Atsinanana ny lafiny fandriampahalemana indrindra ny ady amin’ny dahalo, nisy araka izany ny fandrafetana ny dinam-paritra , ny fanaovana ny operation tsy Mitsitsy nanaovana izany ny tao amin’ny distrikan’I Farafangana, Vangaindrano, Midongy, Befotaka, nofanina ihany koa ireo vahoaka hahay hiaro tena auto defense villageoise, ary nisy ny “forces mixtes” nalefa manokana handrava ny asan-jiolahy tao amin’ny kaominina Anosivelo, Anosy Tsararafa, Vohimasy, Mahavelo, Tangainony . Nohamafisina ihany koa ny fisian’ny patrouille amin’ny alina ao Farafangana nanampy tamin’io hetsika io ireo mpandraraha any antoerana, nihena araka izany ny asan-dahalo sy asan-jiolahy tamin’ity taona ity hoy ny lehiben’ny faritra Namany Belone, hetsika izay nahitana taratra ny maha colonel zandary ny lehiben’ny faritra. Fa eo amin’ny lafiny fampianarana dia nitombo ny isan’ny afa-panadinana tamin’ity taona ity CEPE 62,51%, BEPC 32,34%, BAC 45,03%, notoloran’ny faritra loka avokoa ireo sangany tamin’ireo fanadianana ireo. Ankoatr’izay dia nitohy hatrany ny fitsinjovana ny sosialim-bahoaka toy ny fazahoana ny vary mora, ny ady amin’ny tazo, SIDA ary ny “campagne d’elimination des fistules obstétricales”.
Amin’ny akapobeany dia niezaka ny faritra tamin’ity taona ity tamin’ny fanatsarana ny fampidiran-ketra, nahatratra 173 222 580 ariary ny “recette propre” ny faritra Atsimo Atsinananana tamin’ity taona ity.